Zvinoita Here Kuvhara Rudzi Rukuru Rwokurwisa? - Mhinduro Kubva Semalt
Ransomware uye mavairusi anotendwa kuti ndiyo nzira mbiri dzekutengesa mitambo ye internet. Sezvo mishonga inopera nguva inopedza mano ekoti uye vanachiremba kuti vape zvirongwa zvakanaka zvehutano kuvarwere vavo, rudzikinuro uye mavairasi zvinokonesa kushandiswa kwemunhu kumakombiyuta ake. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kunyange mhando yepamusoro-nhepfenyuro neyakakurumbira maturusi antivirus haikwanisi kushanda zvakanaka - umzug in frankfurt. Mazuva mashomanana adarika, chikamu chinonyangadza chemarware chinotapukisa nhamba yakawanda yemakombiyuta emakombiyuta. Nyanzvi dzezvesayenzi dzinotaura kuti mamiriyoni makumi manomwe emakumi masere akabatwa mukati maawa maviri, kusanganisira dzakawanda zvemakombiyuta zviri muzvipatara zveEngland neUnited States. Kunyange makombiyuta emakombiyuta eFedEx 'mahofisi muUk uye Ministry of Interior yeRussia yakavhiringidzwa nehukinhu huno. Mumaawa mashomanana, zviitiko zvekutya kombiyuta zvakashumwa pamakondinendi mashanu pasi rose.
Chinhu chinosuruvarisa ndechokuti nhamba yakawanda yevashandisi veWindows vakapinda. Vanongogadzira midziyo yavo yavanofarira yaMicrosoft uye vakawana munyaya yemasekondi. Kunyange vashandisi veWindows XP vakanga vaine utachiona hwakakomba uye havagone kuita chinhu asi kukanganwa nezvemakombiyuta avo nehuwandu.
Mutungamiri Mukuru weVatengi Muchengetedzi we Semalt , Nik Chaykovskiy, anokurukura kuti ungadzivisa sei kushungurudzika kwakadaro.
Boka revashandisi vakatumira mavirusi chaiwo uye mapiritsi eMicrosoft akashandurwa mune nhamba inokosha. Iyo faira kugovera mitemo, Server Message Block, nezvimwe, ndiyo yakakosha zvikuru..Mavhareji asina kugamuchira chero kugadziriswa mushure meKubvumbi 2017 ne MS17-010 patch ndiyo yakakosha. Gare gare, boka rimwechete revanokunda rakarwisa maitiro eEexternalBlue uye mahofisi eZimbabwe Security uye yakavhara deta yavo paIndaneti.
Rudzikinuro rwakatumidzwa seWannaCry. Yakanga isina kupararira pasi rose sevadzvinyiriri vakanga varonga kuti ipararire chete munyika shoma yenyika. Yakanga ichipararira kubva kune imwe kombiyuta inoenda kune imwe kuburikidza nekutsvaga uye zvinyorwa zvinyorwa zvemeyili. Nzira chete yekurasikirwa nayo ndeyekudzima nhamba huru yemapurogiramu kunyanya antivirus uye anti-malware zana.
Nenzira yekunzeBlueBlue zvinoshandiswa, mavairasi uye malware akaiswa mumakombiyuta matsva. Imwe muteereri wevhidhiyo anonzi DoublePulsar yakakonzera matambudziko akawanda kune vashandi vayo pasi rose. Yakanga ichienderera mberi ichiparadzira WannaCry kubva kune imwe kombiyuta kuenda kune imwe, uye inogona kunge yakatapukira mazana kusvika kuzviuru zvezviyero panguva. Kune rumwe rutivi, rudzikinuro rwakadai saCloyy rwaida kuti vashandisi varo vabatane nevanotya. Kana wangovhura faira yezwi, WannaCry yaizopararira kune yako yega yega. Chris Doman weA AlienVault akati mune imwe hurukuro naGizmodo kuti aikwanisa kutora maitiro e-malware nevanopikisa kuchengetedza nhamba huru yemakombiyuta pasi rose. Tinofunga kuti vanosemesa vari kuramba vachivandudza zvishandiso zvitsva uye mazano ekuba mashoko evamwe. Vatsvakurudzi vakaona kuti vanokanganisa vakakumbira rudzikinuro kuburikidza neBitcoin nokuti hazvibviri kuti chero munhu upi zvake achinje Bitcoin mubhadharo.
Kana iwe uchinzwa kuti wakamborwa neWannaCry kana imwe shanduro yakafanana, unofanira kudzokorora yako yehutachiona software nokukurumidza. Zvakakoshawo kuti iwe usatora mahwindo epamusoro uye uzarure zvinyorwa zve email. Zvinyorwa zveConficker zvave zvichiparadzirwa kwemazuva mashomanana. Vanokwanisa kutakura nhamba yakawanda ye laptops uye mafaira efoni mumwedzi inotevera. Nokudaro, zvakakosha kupora nekuisa kuchengeteka software uye zvirongwa nguva dzose.